Marka laga reebo Safaris Duurjoogta ah, Hadda Waa Dalxiiska Golf ee Bariga Afrika
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Tansaaniya » Marka laga reebo Safaris Duurjoogta ah, Hadda Waa Dalxiiska Golf ee Bariga Afrika
Guddiga Dalxiiska Afrika • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Wararka Dowladda • Warshadaha Warshadaha • News • Sports • Wararka Tansaaniya • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka
Dr. Numbaro iyo Mr. Najib Balala oo ka hadlaya Dalxiiska Golf -ka ee Bariga Afrika
Kaliya maahan safarrada duurjoogta ee Bariga Afrika, hadda dalxiiska isboortiga ayaa soo socda si kor loogu qaado safarka firaaqada ee gobolka si loo soo jiito dalxiisayaasha isboortiga si loo ballaariyo xirmooyinkooda safarka ee duurjoogta ilaa cayaaraha ka baxsan jardiinooyinka ilaalinta.
Dalxiiska Golf-ka ayaa hadda loo bilaabay inay noqoto dhacdooyin isboorti oo dalxiis goboleed si loo soo jiito safarrada firaaqada ee ku wajahan isboortiga.
Wasiirka Dalxiiska Tansaaniya iyo Xoghayaha Dalxiiska ee Kenya ayaa ku kulmay magaalada Arusha ee waqooyiga Tansaaniya ee dalxiiska si ay uga qaybgalaan daahfurka Dalxiiska Golf -ka ee Bariga Afrika.
Baakado gaar ah oo loogu talagalay dalxiiska isboortiga ayaa markaa la diyaarin doonaa si ay ugu habboonaadaan goleyaasha caalamiga ah ee booqda Tansaaniya.
Tansaaniya iyo Kenya, oo ah labada hoggaamiye ee safari ugu safraya Bariga Afrika, ayaa hadda bilaabay Dalxiiska Golf-ka iyada oo ah dhacdooyin isboorti oo dalxiis goboleed oo lagu wado inay soo jiitaan noocyo cusub oo safarro firaaqo u janjeedha isboortiga ah oo ka socda gobolka Bariga Afrika (EAC) iyo qaybo ka mid ah adduunka .
Wasiirrada dalxiiska ee labada dal ayaa isku raacay in la soo bandhigo oo markaas kor loo qaado Dalxiiska Golf -ka ee labada gobol, ujeedaduna tahay in la soo jiito dalxiisayaasha isboortiga si ay maalmahooda ugu qaataan gobolka.
Dalxiiska Golf -ka waxay sidoo kale soo jiidan doontaa goleyaasha heerka caalami si ay u soo booqdaan gobolka ka dibna ay maalmahooda ku qaataan ka -ciyaarista garoon golf gaar ah oo ku yaal Waqooyiga Tansaaniya iyo Kenya.
Najiib Balala oo kubbad jeexaya
Wasiirka Dalxiiska Tanzaaniya, Dr. Damas Ndumbaro, iyo Xoghayaha Dalxiiska Kenya, Mr. Najib Balala, ayaa ku kulmay magaalada Arusha ee Waqooyiga Tansaaniya ee dalxiiska si ay uga qaybgalaan daahfurka Dalxiiska Golf -ka ee Bariga Afrika.
Hadda, Dalxiiska Golf -ka ayaa dhowaan noqon doona soo jiidashada kale ama alaabada dalxiiska si loo soo jiito booqdayaasha gobolka iyo kuwa caalamiga ah, kuwaas oo markaa isku dari doona booqashooyinkooda booqashooyinka safarrada duurjoogta iyo fasaxyada xeebta ilaa teefka golf -ka.
Baakado gaar ah oo loogu talagalay dalxiiska isboortiga ayaa markaa la diyaarin doonaa si ay ugu habboonaadaan goleyaasha caalamiga ah ee booqda Tansaaniya. Madaxweynaha Ururka Golf -ka Tansaaniya (TGU), Chris Martin, ayaa kalsooni ku qabay wuxuuna yiri Tansaaniya waxay u baahan tahay inay samayso koorsooyin golf -ka si ay u soo jiidato ciyaartoy caalami ah iyo dalxiisayaal.
Qiyaastii 140 ciyaartoy golf ah oo ka kala socda 13 dal oo ay ku jiraan Mareykanka, Australia, Canada, Belgium, Netherlands, England, China, Kenya, India, Zimbabwe, South Africa, Uganda, iyo martigaliyayaasha Tansaaniya ayaa ka baxay dhacdadii Dalxiiska “Kili Golf” ee Koowaad.
Dalxiiska Ciyaaraha ayaan qeyb ka ahayn ololaha socdaalka ee Tansaaniya, waxaana daahfurka Dalxiiska Golf -ka uu soo jiidan doonaa kharashaad badan halkaas oo dalxiisayaashu ay ku dari lahaayeen maalmo badan oo ay ku joogaan Tansaaniya si ay ugu raaxaystaan ​​teefka golf -ka.
Golf waa mid ka mid ah isboortiga soo jiita dalxiisayaal aad u tiro badan wuxuuna soo saaraa in ka badan $ 20 bilyan sanadkiiba heer caalami.
Waxay ka timid meeshan Tansaaniya waxay go'aansatay inay bilawdo suuqgeynta dalxiiska iyada oo loo marayo tartamada golf -ka.
Magaalada Arusha waa bar bilow u ah dalxiisayaasha ku ballansan jardiinooyinka Safari ee Waqooyiga ee Tarangire, Lake Manyara, Ngorongoro, iyo Serengeti.
Iyagoo bartilmaameedsanaya inay u suuq geeyaan gobolka Bariga Afrika hal goob oo dalxiis, wasiirrada dalxiiska iyo mas'uuliyiinta hab -maamuuska gobollada ee 6 -da dal ee xubnaha ka ah ayaa dhammaantood isku raacay in la dhiso sannadlaha ah EAC Regional Tourism Expo (EARTE) iyadoo ujeedadu tahay hagaajinta muuqaalka gobolka iyo suuqgeynta waa goob dalxiis oo kaliya.
Dawladaha Bariga Afrika ayaa dhammaadka wiigga soo socda ku qaban doona carwo dalxiis oo weyn Arusha, oo ah magaalada safari ee Waqooyiga Tansaaniya. Waa bandhiggii ugu horreeyey iyo bandhig dalxiis oo weyn oo ka dhaca Bariga Afrika.
Bandhiggu wuxuu soo jiitay ka -qaybgalayaasha waddamada xubnaha ka ah Tansaaniya, Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, iyo Koonfurta Suudaan si ay ugu soo bandhigaan goobaha dalxiiska ee ay ku mideysan yihiin dalladda is -dhexgalka gobolka ee dalxiiska.
Tansaaniya iyo Kenya ayaa taageeray dhaqdhaqaaqyada xorta ah ee socdaallada gobolka iyo kuwa caalamiga ah kadib markii madaxweynayaasha labada dowladood ee dariska ah ay ku heshiiyeen in kor loo qaado safarada gobolka iyo isu socodka dadka.
Urur -goboleedka Bariga Afrika ayaa hadda tusaale wanaagsan u ah horumarinta dalxiiska gobolka oo hoos imanaya hal madal oo Guddiga Dalxiiska Afrika uu sidoo kale u ololaynayo horumarka qaaradda oo dhan.